Alemaina - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Repoblika federaly ny Alemaina)
Bundesrepublik Deutschland ((de))
Repoblika federaly ny Alemaina ((mg))
Teny filamatra : Einigkeit und Recht und Freiheit
Teny ofisialy Alemana
Tanàna ngeza indrindra Berlin
- Presida federaly
- Chancelier fédéral Repoblika federaly
- Rano (%) faha 63
82 314 906 mpo.
Anaran'ny mponina Allemana
IDH (2005) Mihakatra 0.935 (ambony) faha 22
Hiram-pirenena Deutschlandlied, antema faha telo ny (Einigkeit und Recht und Freiheit)
Tamin'ny nahafaranan'ny ady Frankô-jermanika tamin'ny 1871, Lasa zana-tany Prosy (jereo Prusse amin'ny teny frantsay) izy ary ny empira Prosy no nampiray an'i Alemaina tety aoriana : tamin'izany fotoana izany ny andron'ny Reich faha II na Reich Wilhelminiana. Ny faharesen'ny Alemaina tamin'ny Ady Lehibe Voalohany tamin'ny 1918 dia nampilatsaka ny Reich Wilhelminiana ary nitondra ny fahatongavan'ny Repoblika tao Alemaina Nanomboka ny Reich faha III tamin'ny taona 1933 faha nihongana ilay izy tamin'ny taona 1945, teo arinan'ny Ady Lehibe Faharoa.
6 Lahatsoratra ilaina
Ilay teny Deutschland no manome ilay tantara lava an'i Alemaina. Nisy tamin'ny vohalohany ilay teny hoe thiuda midika "mponina" ; thiudisk no mpamaritra anarana. Nisoloin'i Romana Theodischus ilay teny ary aveo nivadika ho Teudischus. Nivadika Diutisca izy tamin'ilay fiteny alemana taloha (na koa fiteny Todeska). Nivadika todesche izy amin'ny fiteny frantsay ary tetỳ aoriana dia nivadika tudesque. Ny fiteny italiany dia mampiasa ny teny tedesco rehefa manonona ny alemana
saritany ara-toe-tan'i Alemaina
Tsy manana contrainte mikasika ny jeografia sy ny toe-tany ny Alemaina. Tany lemaka ny any avaratra, eo anivo dia misy tendrombohitra efa tranainy sady ambany haavo, any atsimo misy ny tendrombohitra alpina. Any avaratra ihany ny alemaina no manana amorontsiraka eo amin'ny ranomasina Baltika.
Ny Alemaina dia firenena manan-danja amin'ny lafin'ny toe-karena sy amin'ny lafin'ny isam-ponina (demôgrafia).
Any andrefan'i Alemaina no misy ny Eoropa Rhinaina, faritany anisan'ny be orinasa indrindra ao Eoropa ary anisan'ny manan-karena indrindra ao Eoropa sy manerana ny tany io faritany io.
Niovaova matetika ny sisitanin'i Alemaina tamin'ny taonjato faha 20. Namarana ny Empira Alemana ny faharesen'i Alemaina tamin'ny taona 1918. Nahenan'i Fifaneken'i Versailles ho 468 776 km2 ny velarantan'ny firenena alemana (nefa 540 848 km2 ny velarantaniny teo alohan'io). Verin'i Alemaina ny faritra Alsace-Lorraine. Sarahin'ny Polonia ny Prosy Atsinanana eo amin'ny faritra manodidon'i Gdansk (Dantzig amin'ny teny alemana).
Tao aorian'ny faharesen'i Alemaina tamin'ny 1945, eo amin'ny tany alemana ny tafiky ny firenena nandresy an'i Alemaina. Ary any atsinanana, misy alemana 11 tapitrisa mahery no roahana satria lasan'i Polonia ny faritra atsinanan'i Alemaina miaraka amin'i Prosy Atsinanana. Ny vokatry ny Ady Mangatsiaka dia ny fisarahan'ny faritra Andrefana atao hoe Repoblika Federaly Alemana sy ny faritra Atsinanana atao koa hoe Repoblika Demokratika Alemana ho lasa firenena roa samihafa. Ny fiainana ao amin'ny RDA dia mitovitovy amin'ny firenena izay anjadian'i FRSS.
Tamin'ny 9 Novambra 1989, Narodana ny rindrin'i Berlin natsangan'ny Sovietika tamin'ny 1961, herin-taona teo aorian'io, tamin'ny 1990, nanjavona ny RDA. Io firenena vaovao io indray dia voatery mampanjary any amin'ny faritra any atsinanana noho ny fahanteran'ny RDA taloha amin'ny lafiny ara-toe-karena ary amin'ny lafin'ny foto-drafitr'asa.
Ankehitriny, dia mbola misy tsi-fitoviana ny lanja ara-toe-karen'ny faritany alemana any atsinanana tsy ny faritany alemana any andrefana noho ny fisarahana nisy tamin'ny Ady Mangatsiaka.
Firenena[hanova | hanova ny fango]
Alemaina dia ahitana firenena 16:
Schleswig-Holstein Kiel Lübeck, Flensburg
Niedersachsen Hannover Braunschweig, Wilhelmshaven
Mecklenburg-Vorpommern Schwerin Rostock
Sachsen Dresden Leipzig, Chemnitz
Sachsen-Anhalt Magdeburg Halle (Saale)
Bayern München Nürnberg, Augsburg
Thüringen Erfurt Weimar
Baden-Württemberg Stuttgart Karlsruhe, Freiburg, Villingen-Schwenningen
Hessen Wiesbaden Franckfort/Main, Kassel
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Köln, Essen
Rheinland-Pfalz Mainz Koblenz, Ludwigshafen
Saarland Saarbrücken Saarlouis
A manual for Germany — Representative for Migration, Refugees and Integration
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Alemaina&oldid=971544"
Voaova farany tamin'ny 20 Jiona 2019 amin'ny 12:55 ity pejy ity.